धर्म व्हील (धर्माचक्र) बौद्ध को प्रतीक
बौद्ध धर्मको प्रतीक
संस्कृतमा धर्म पहिया, या धर्माचाक्रा बौद्ध धर्मको सबैभन्दा पुरानो प्रतीक हो। विश्वभर, यो क्रूसले ईसाई धर्म वा एक स्टार डेभिड को प्रतिनिधित्व गर्दछ यहूदावाद को प्रतिनिधित्व गर्दछ जस्तै बौद्ध धर्म को प्रतिनिधित्व गर्न को लागि प्रयोग गरिन्छ। यो बौद्ध धर्मको आठ शुभ प्रतीकहरूको पनि छ। जैनवाद र हिन्दू धर्ममा समान प्रतीकहरू भेटिन्छ, र यो हिन्दू धर्मबाट विकसित बौद्ध धर्ममा अवधारणा प्रतीक हुन सक्छ।
एक पारंपरिक धर्म पहिया एक अलग रङ्ग को संख्या संग रथ पहिया हो। यो कुनै पनि रंगमा हुन सक्छ, यद्यपि यो प्रायः सुन सुनको हुन्छ। केन्द्रमा कहिलेकाहीं त्यहाँ तीन आकारहरू एकसाथ घुमाइरहन्छन्, यद्यपि कहिलेकाहीं केन्द्रमा कहिले यिन-याङ्ग चिन्ह हो , वा अर्को पहिएला वा खाली सर्कल हो।
के धर्म व्हील प्रतिनिधि
एक भाग पहियामा तीन आधारभूत भागहरू छन् - हब, रिम र प्रवक्ता। शताब्दीमा, विभिन्न शिक्षकहरू र परम्पराहरूले यी भागहरूको लागि विभिन्न अर्थहरू प्रस्ताव गरेका छन्, र तिनीहरू सबैको वर्णन यस लेखको दायरा भन्दा बाहिर छन्। यहाँ व्हीलको प्रतीकत्वको केही सामान्य बुझाइहरू छन्:
सर्कल, पहिया को गोल आकार, बुद्ध को शिक्षण को पूर्णता को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
व्हील को रिम मनपर्दो एकाग्रता र दिमागीपन को प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन एक साथ अभ्यास गर्दछ।
हब नैतिक अनुशासनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तीन घुमक्क बारम्बार हबमा देखिन सकिन्छ कहिलेकाहीँ तीन खजाने वा तीन ज्वेल्सहरू - बुद्ध, धर्म, सङ्गहालाई प्रतिनिधित्व गर्ने। तिनीहरू पनि आनन्दको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्।
प्रवक्ताले उनीहरूको नम्बरमा निर्भर गर्दछ, फरक कुरालाई सङ्केत गर्छ:
जब एक पहिए चार प्रवक्ता छन्, दुर्लभ छ भने, प्रवक्ताले पनि चार नोबल सत्य वा चार दिशानिर्देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
जब एक पाङ्ग्रा आठ प्रवक्ता छन्, प्रवक्ताले आठ औंल्ड पथ को प्रतिनिधित्व गर्दछ। एक आठ-भाडा पहिए बौद्ध धर्म मा पहिया को भन्दा धेरै साधारण छ।
जब एक चक्रमा दस प्रवक्ता छ भने, प्रवक्ताले दस दिशाहरू प्रस्तुत गर्दछ - प्रभावकारी, हरेक ठाउँमा।
जब एक पाङ्ग्राको बाह्र प्रवक्ता छ, उनीहरूले आन्तरिक समाप्तिको बाह्र लिङ्कहरू प्रतिनिधित्व गर्छन्।
जब एक व्हील 24 प्रवक्ता छन्, उनीहरूले आन्तरिक ब्यक्तिको बारह लिङ्कहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ साथै ब्वाइल लिङ्कहरू र एसमसाराबाट मुक्तिको उल्टाइ । 24-बोल्ने धर्म पहिया पनि अशोक चक्र भनिन्छ , तल छलफल गरिएको।
जब एक चक्र 31 प्रवक्ता छ, प्रवक्ता प्राचीन बौद्ध ब्रह्मांडोलबाट 31 अस्तित्व को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
व्हीलले अक्सर व्हील भन्दा बाहिर फैलाउने प्रवक्तालाई छ, जुन हामीले कल्पना गर्न सक्दछौं, यद्यपि सामान्यतया उनी ती तीव्र देखिँदैनन्। स्पाइकले विभिन्न आनुवंशिक अंतर्दृष्टिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
आभाको महान (304-232 ई.पू.) द्वारा बनाईएको स्तम्भहरूमा पुरानो अवस्थित उदाहरणहरू मध्ये एक सम्राट जसले भारत र त्यसभन्दा बढी अहिलेसम्म शासन गरे। अशोक बौद्ध धर्मको एक महान संरक्षक थिए र यसको फैलावलाई प्रोत्साहन दिईयो, यद्यपि उहाँले त्यसलाई उनीहरूको विषयहरूमा कहिल्यै दियो।
अशोकले आफ्नो राज्य भरमा ठूलो ढुङ्गा स्तम्भहरू निर्माण गरे, जसमध्ये धेरै अझै पनि उभिएका छन्। स्तम्भहरूमा व्यभिचारहरू छन्, जसमध्ये केहीले मानिसहरूलाई बौद्ध नैतिकता र अहिंसाको अभ्यास गर्न प्रोत्साहित गरे।
सामान्यतया स्तम्भ को माथि कम्तीमा एक शेर हो, अशोकको शासन को प्रतिनिधित्व गर्दछ। स्तम्भहरू पनि 24-भाषणमा पर्खालको साथ सजाइएका छन्।
1947 मा, भारत सरकार ने एक नयाँ राष्ट्रीय झण्डा अपनाया, जसको केन्द्र मा एक सेतो पृष्ठभूमि मा एक नौसेना नीला अशोक चक्र हो।
अन्य प्रतीक धर्म व्हील संग सम्बन्धित
कहिलेकाहिँ आकृति व्हील एक प्रकारको टेबलौमा प्रस्तुत गरिएको छ, दुई हिरण संग एक कमल फूल पैदल चलखेलमा समर्थित छ, एक बाक र एक कुनामा। यो ऐतिहासिक बुद्ध द्वारा प्रदान गरिएको पहिलो उपदेश को उनको प्रकाश पछि को सम्झना गर्दछ। उपदेशलाई सारनाथमा पाँच मिथिलाहरूलाई दिएको छ, अब उत्तर प्रदेश, भारतमा हिरण पार्क।
बौद्ध पौराणिक कथाको अनुसार, पार्क रूरू हिरणको घर थियो, र हिरण वरिपरी उपदेश सुन्नुभयो। धर्म व्हील द्वारा चित्रित हिरण हामीलाई सम्झाउँछ कि बुद्धले मानिसहरु मात्र होइन, सबैलाई बचाउन सिकाउनुभयो।
यस कथाको केही संस्करणहरूमा, हिरण बोधिसत्वहरूको भनाइ छ ।
सामान्यतया, जब हिरालो हिरणले हिरण संग प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यो चट्टान हिरणको उचाई दुई पटक हुनुपर्छ। हिरण तिनीहरूलाई तल राखिएको खुट्टाको साथ देखाइन्छ, तिनीहरूका नाकहरु संग उठाएको पहेंलोमा घिमिरे घिमिरे।
धर्म व्हील घुम्दै
"धर्मशाला चल्दै" संसारको धर्मको शिक्षण बुद्धको लागि एक उपन्यास हो। महायण बौद्ध धर्ममा , यो बुद्धले तीन चोटि धर्म पहलमा परिवर्तन गर्यो ।
पहिलो चोटि बुद्धको उज्ज्वल पछि हिरण पार्कमा उपदेश थियो। यहाँ बुद्धले चार नोबल सत्य बताउनुभयो।
दोस्रो चोटि सूर्य्याता , खालीपनको प्रकृतिमा बुद्धि शिक्षाहरू पूर्णताको परिचय थियो।
तेस्रो मोड बुद्ध प्रकृतिको सिद्धान्तको परिचय थियो।
ग्यारह लेजेंन्डरी बौद्ध मंदिरहरु
संसारको निर्माण नर्वे रोग विज्ञानमा
जॉन क्याल्विन जीवनी
10 तपाईं न्यूयर्क शहरमा हुँदा कुराकानी कुरा देख्नुहुन्छ
कसरी एक मेपोल नृत्य संग बेल्टेन मनाउन
भगवानको भूमिका र बौद्ध धर्ममा देवताहरू
स्कट क्लिफटन को बारे मा 25 तथ्य
प्रकार्यको रूपमा प्रकार्य रिटर्न प्रकार र विधि परिमिति
बास मा मुख्य मेज
शिक्षक बिहार र अलिकति विश्वासबाट जोगिन
इटालियन बव्वायर्स वाक्यांश - भोजन आउट
ईथिक्स र नैतिकतामा आइन्स्टीन उद्धरण
चित्रा रेखा चित्रणमा संलग्न
3 आधारभूत एम्फिबियन समूह
संस्कृत शब्दहरू पीका साथ सुरु हुँदै
हम्मस्टोन: सरल र पुरानो स्टोन उपकरण
हाम्रो प्रारम्भिक इतिहास मा खगोल विज्ञान
टोकियोपॉप मंगा सिर्जनाकर्ता (सफ्टवेयर) समीक्षा
बितेको / सेवानिवृत्त युद्धका बक्सर्स
Dorms बाट बाहिर जान्छ?
एक चियरलेडिंग स्क्वाड शुरू गर्दै
हिप्पोक्रेट - चिकित्सक हिप्पोक्रेट र यूनानी औषधि
जादू को मकई